သံရွေကြွေစည်သကြားစက်ရုံ - တရုတ်သွပ်ကြွေကြွေထည်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီ၊ ပေးသွင်းသူများ
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: JTA22, JTA 24 ပစ္စည်း - သံသတ္တုကြွေထည်အရွယ်အစား - ၂၁.၅ * ၉， ၂၄.၅ * ၁၂ ထုပ်ပိုးခြင်း - လေးထောင့်ကွက် ၁။ ပိုမိုပေါ့ပါးသောကြွေထည်ဖြင့်ပြီးသောမီးဖိုသည်ချက်ပြုတ်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးအစွန်းအထင်းမရှိသောအဆိပ်အတောက်ကင်းသော၊ အနက်ရောင်ကြွေကြွေအတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင်ဖြစ်သည်။ နှစ်သိမ့်မှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုရှိစေရန်အတွက်ထောင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်သည့်ကိုင်တွယ်သည်။ 3. ပိုမိုထူထပ်သောအခြေခံသည်အပူဖြန့်ဝေခြင်းကို ပို၍ ပင်ပြုလုပ်သည်။ 4.Tiered အဖုံးဒီဇိုင်းသည်အရသာရှိသောစိုစွတ်သောအစားအစာအတွက်အတွင်းပိုင်းရေငုပ်ခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။
ပစ္စည်းအရေအတွက် KAR26 ပတ်ပတ်လည် Casserole D: ၂၁.၅ စင်တီမီတာ ၂၄ စင်တီမီတာ ၂၆ စင်တီမီတာ ၂၈ စင်တီမီတာ Oval Casserole ၂၈x ၂၁ စင်တီမီတာ ၃၀x ၂၃ စင်တီမီတာသွင်ပြင်လက္ခဏာများသံမဏိအဖုနှင့်ကွင်းဆက်လက်ကိုင်များသည်ကြီးမားသောထိန်းချုပ်မှုအရောင်များအတွက်အနီ၊ အဝါ၊ အပြာ၊ ပန်းရောင်၊ အနက်ရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ကြွေကြွေပြားဖုံးအုပ်မှုဖြစ်သည်။ သာလွန်သောအပူဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားခြင်း 3. သံသတ္တုစပ်များသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်အညီအမျှအပူပေးသည်။ ၄။ နှေးကွေးသောချက်ပြုတ်မှုအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ ထူးခြားချက်များ။ ကောင်းမွန်သောသံမဏိဘူးသီးနှင့်ကွင်းဆက်လက်ကိုင်များကောင်းမွန်သောဖန်မျက်နှာပြင်သည်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုမတုံ့ပြန်ပါ။
ပစ္စည်းအမှတ် KA3006 ပတ်ပတ်လည်ရှိ Casserole D: 27CM / 30CM အင်္ဂါရပ်များသံမဏိအဖုနှင့်ကွင်းကွင်းအကြီး၊ အဝါရောင်၊ အပြာ၊ ပန်းရောင်၊ အနက်ရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်အပေါ်ယံပိုင်းကြွေပြားခင်းခြင်း။ သံမဏိနှင့်အညီအမျှအပူပေးသည်။ 4. နှေးကွေးစွာချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်ကောင်းမွန်သည်။ အထူးကောင်းမွန်သည်။ သံမဏိဘူးသီးနှင့်ကွင်းဆက်ကြီးများထိန်းချုပ်မှုအတွက်အထူးကောင်းမွန်သည်။ ဖန်သားမျက်နှာပြင်သည်ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုမတုံ့ပြန်ပါ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သံမဏိသည်အပူနှင့်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။